Bluetooth Glorious Self Ukulinganisela Scooters - Jomo Technology Co., Ltd
Nangona, enye yeendlela ezigqwesileyo kukuba ukuthenga ukusuka umthengisi lokwenene ngokufanelekileyo-singcolile ukuze aphuthise nethemba naziphi na izehlo ezinjalo. Le ndlela akuyi ulahlekelwe indlela yakho kwaye akukho mfuneko yokuba ukhathazeka kakhulu malunga yezithuthi ezizayo. I- 2 Wheel Ukulinganisela Scoote r ubomi bebhetri Powerboard`s ichanekile, yaye uza kuba euphoric nale zeyunithi onke amaxesha nje kamnandi. Ungase uhambe kuba scooter eye Isalathisi ebhetri ukuba ungabona umgangatho we ubuchule kwebhetri. Bona eziyimfuneko ADA ezinamavili, Mobility Aids, kunye Okunye Energy-Nempembelelo Mobility Gadgets apho uyakwazi ukufunda apha. Ngoko funda i 8.5inch Smart Ukuxhathisa Isithuthuthu Bluetooth ubenemboniselo yangaphezulu hoverboard amavili big K7 apha phambi uyithenga. Nantsi a nice uvavanyo ividiyo lushwankathela inani le. Hover in fashion, siya link kwi umthengisi emva kwakho ufunde kwi jikelele we yaqulunqwa kwaye iyakuba ukudibanisa ukuba yobambiswano phakathi kwe US
Ukuba kuphela ufuna ukwenza ukusetyenziswa scooter lokonwaba engafani hoverboard self balancing uya mkhulu ngokwaneleyo. Kwakhona, le ngezithuthuthu bonke ntlango, kwaye kufuneka usebenzise kubo udaka, ikhephu, izitrato kunye imiphezulu nesanti. Ekuqaleni, hoverboard self balancing k7 yi amavili 8.5inch enkulu ngaphakathi nangaphandle-wendlela efanelekileyo zokukhwela elunxwemeni. Ngoko ke inamava ekhwele elungileyo. Okwesibini, 500W Motors, igunya namandla. Okwesithathu, motherboard inkqubo ezimbini, ukuphucula ukusebenza yemveliso nasemva-yokuthengisa. Ngapha koko, ukuba imo yabucala yimbonakalo kuphela wechiza, unique ngakumbi. Na lyo line, iqela wakhuthaza isandla nomsebenzi owenziwayo kunye imithetho kunye nenjongo ngokusemthethweni ukusetyenziswa kwazo. Ukuba uthenga nye? Ngoko ke, ngaphambi kokuba uthenge into hoverboard ukuqinisekisa ukuba ibhetri yayo lukhuselwe ngempumelelo kwaye iza ulawulo libalaseleyo kunye neyunithi yokutshaja. Ngaba yapasisa Ul2272 aqinisekise?
Le Powerboard ngu Hoverboard ukuze ibe ngezithuthuthu self-balancing ebiza mhlawumbi phaya kunye ukubuza umbuzo wonke kukuba: "Ngaba ngentengo ixabiso? I Koowheel self balancing ixabiso scooter kufanelekile kakhulu .Enyanisweni, Koowheel musa ukwenza imveliso libya ukhuseleko lwabathengi yakhe. Yeyona ukukhetha elihle ukuba kukho amathuba okuba iya kuba abantwana abancinane endandikhwele kulo. I- Self-Ukulinganisela Isithuthuthu K8 ngu KOOWHEEL kusenokuba lula kakhulu ukuyisebenzisa, kwaye nje kufuneka siqiniseke ukuba uza kukwazi ukubambelela into kanti ekhwele kule bhodi. Iimbonakalo:
Hoverboard K8 yenzelwe e Milan, loo nto ekuqaleni market EU wena
uyilo Handle Hidden, ngokulula kwenziwe
Off uyilo wheel lwendlela, ngokulula ukubamba amehlo phakathi models avareji
ubunzima slim nokukhanya
imigca Green on Pedal
Ziziphi iingenelo iye?
Koowheel musa ukwenza iimveliso libya
Hoverboard K8 uhlala Top standard umgangatho
Sebenzisa kuphela abathengisi Top ukuba PCB, Motor, Charger
Eyona inokuthenjwa hoverboard 24V 6.5inch
Ibhetri nayo yonke imigangatho yokhuseleko
Kusezantsi rate valve
Ngoko ke, lo self balancing scooter yeyona imisebenzi engcono kwiimeko zokhuseleko ukuze adane. Emva koko ke xhoma ngomlenze omnye phezu swegway. Kwabo bafuna into kakuhle yaye ukulungele ukuba ahlawule ixabiso, ngoko oku indlela engcono.